We She Me: ပုစွန်ဆိတ်ဟင်း
| FLAGS: Australia , Recipes
စစ်ကိုင်းသူ - 6/14/08, 1:38 AM
ကိုအန်ဒီရေ တကယ်သွားရည်ယိုသွားတာ။ တောင်ပိုင်းမှာ ငါးပုဇွန်ပေါပေမဲ့ မြောက်ပိုင်းမှာက သိပ်မတွေ့ဘူးရယ်။ ဈေးကြီးမှာတော့ တခါတလေ ရတယ်ပြောပေမဲ့ ဈေးကလဲ မသွားဖြစ်တော့ တောင်ပိုင်းကို သွားတုန်းက စားခဲ့ရတာကလွဲလို့ ငါး ပုဇွန်မစားရတာ ဒီရောက်ကတည်းကပဲ။ စားချင်လိုက်တာ။ ပြန်ရောက်မှ အဝစားရမယ်။ ပြန်ရကာနီးနေပြီဆိုတော့ အဲလိုပဲကြုံးဝါးနေရတယ်။
War War - 6/14/08, 1:41 AM
eek.. I also like that curry too much.. It'saperfect match with "chin paung hin". Ko andy.. Your curry looks so delicious.. Mouth watering.. :D
Htoo Tay Zar - 6/14/08, 7:27 PM
Today my mom cooked that curry bro =) we've same!! =P
nu-san - 6/15/08, 5:11 PM
Andy ရေ..ပုဇွန်ဟင်းက စားချင်စရာ။ ဒီမှာတော့ အဲဒီလို ပုဇွန်အရွယ်တွေ ရှားတယ်။ တခါတလေမှ တွေ့ရတတ်တယ်။ ဓာတ်ပုံကြည့်ရတာ စားကောင်းမယ့်ပုံနော်.. ကလေးတို့မေမေက ငရုတ်သီးပါတာ စားလို့ရပြီလား.. :)
win zaw - 6/16/08, 3:28 PM
မဖိတ်ဘဲ မြိတ်ရည်ရှက်ရည် စားသွားပါတယ်။
တကူးတက ရှယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ပီတိ - 6/16/08, 8:32 PM
ဟုတ်တယ် ကိုအန်ဒီရေ… အခုတော့ အမေချက်တဲ့ ငါလေးအိုးကပ်ချက်၊ ပုဇွန်ဆိတ်ကလေးချက်၊ ကွန်းမန်လို့ခေါ်တဲ့ ငါးမြင်းပေါက်စ ချက်တွေကို စားချင်နေမိတယ်။
Andy Myint - 6/16/08, 11:50 PM
မစစ်ကိုင်းသူကလည်း ငါးတွေ ပုစွန်တွေ ကြိုက်တယ်လား။ မြန်မာပြည် ပြန်ခါနီးဆို ဘာစားရမလဲ စဉ်းစာရတာကိုက အရသာလေ။
ကျေးဇူးပဲ ၀ါဝါ။ ချဉ်ပေါင်ကြော်နဲ့ ပုစွန်ကတော့ လိုက်မှလိုက်ပဲ။
ဟုတ်လား ထူးတေဇာ ကောင်းတာပေါ့။
တော်သေးတာပေါ့ မနုစံ တစ်ခါတစ်လေ ရတယ်ဆိုလို့။ ဟုတ်တယ် အစ်မ သူကတော့ အစပ်သိပ်စားလို့ မရသေးပါဘူး။
စားပါ ကိုဝင်းဇော်။ ဘလောက်မှာ ဧည့်ခံထားတာပဲ။ အကုန်လုံးကို ဖိတ်တယ်လို့သာမှတ်။
ကွန်းမန် ဆိုတာ အခုမှ ကြားဖူးတာ ကိုပီတိ။ ငါးမြင်းကလည်း အစစ် မစားရတာ ကြာလို့ ဘယ်ဟာ အစစ် ဘယ်ဟာ အတုမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ဒိုက်စော် မနံရင် ပြီးရော ဖြစ်နေတယ်။
khin oo may - 6/23/08, 9:05 PM
Anonymous - 1/30/11, 8:48 PM
်Fiji ကုလားဆိုင်မှာ မွေပြီးရေခဲရိုက်ထားတဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်တွေမေးဝယ်လို့ရတယ် ၅ ဒေါ်လာလောက်ဆို အတော်ကျော်လို့ရပြီး
ပုစွန်ဆိပ်ကတော့ ကျနော်တို့ကမ်ဘာရာမှာလဲ တခါတလေမှ ရနိုင်တာပါ
Andy Myint - 2/3/11, 10:29 PM
လမ်းညွှန်တာ ကျေးဇူးပါ။ ဆစ်ဒနီက မြန်မာဆိုင်တွေမှာ ဖီဂျီက ချဉ်ပေါင်တွေ တွေ့လို့ ၀ယ်ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာညို - 7/3/12, 9:50 PM